काठमाडौंको फोहोर नउठ्दा झाडापखालाका बिरामी बढे « हाम्रो ईकोनोमी
काठमाडौंको फोहोर नउठ्दा झाडापखालाका बिरामी बढे
दुई साताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठ्न नसक्दा झाडापखालाका बिरामी बढेका छन् । बर्खाको समयमा सडकपेटीमा जम्मा भएको फोहोर बिग्रिएर दूषित हुँदा झाडापखालाको प्रकोप सुरु भएको छ । सरुवा रोग अस्पताल टेकुका अनुसार दैनिक औसतमा १० जना झाडापखालाका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले दिनप्रतिदिन बिरामी बढ्न थालेको जानकारी दिनुभयो । अहिले अस्पतालमा उपचार गर्न भर्ना भएका बिरामीमध्ये अधिकांश झाडापखाला र सर्पले टोकेका भएको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालको रेकर्डअनुसार जेठमा ८४ जना सर्पले टोकेका र १२९ जना झाडापखालाका बिरामी छन् ।
राजधानीमा फोहोर थुप्रिएको केही दिनदेखि झाडापखालाका बिरामी बढ्न थालेका हुन् । सरुवा रोगविज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार झाडापखालाका बिरामी आउने क्रम बढेको छ । ‘सामान्य अवस्थाका बिरामी बहिरंग विभागमा आउँछन्, सिकिस्त आकस्मिक कक्षमै आएका छन्,’ डा.पुनले भन्नुभयो। झाडापखालाको कारण भने परीक्षणबाट पत्ता लाग्न नसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
नयाँ प्रकारको झाडापखाला देखिएकाले लक्षणका आधारमा उपचार गरिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । सडकमा थुप्रिएको फोहोरबाट निरन्तर दूषित पानी बगिरहेको र उक्त पानी फलफूल वा खानेपानीमा मिसिएका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले राजधानीको फोहोरले झाडापखालाका बिरामी बढ्न थालेको बताउनुभयो। अझ अहिले निरन्तर पानी परेकाले फोहोर तितरबितर भएको छ ।
खानेपानीमा यसको फोहोर मिसिने भएकाले झाडापखालाको प्रकोप बढाएको उहाँको भनाइ छ । ‘समयमा यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा हैजाको महामारी निम्त्याउनेछ,’ मरासिनीले भन्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महामारीको पूर्वतयारी अझै थालेको छैन । फोहोरले जनस्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असर र यसबाट जोगिने उपायबारे मन्त्रालय मौन छ ।